“မဲပေးခဲ့သူ တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးကတော့ ဆီလိုအပေါက်ရှာမနေပါနဲ့တဲ့” | Myanmar My Always
← ဘယ်ထိအောင်လျှော့မလဲ စိန်စိန်
အသားထဲက လောက်မထွက်ပါစေနဲ့ →
“မဲပေးခဲ့သူ တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးကတော့ ဆီလိုအပေါက်ရှာမနေပါနဲ့တဲ့”	Posted on April 23, 2012	by nyuntshwe “ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်”
ဘယ်ဒင်းက ပြင်းသလဲ၊ ကျနော့် အမြင်
ကိုရွှေထီးတို့ ကိုလား သံဃာ (ဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်တန်ရာ) တို့က ဆက်ပြီးလျှာမရှည်နဲ့ ဒေါ်စုနောက်က ခြေစုံပစ်ပြီးဝင်ရပ်လို့ အမိန့်ပေးပေမဲ့ ပြောစရာလေးတွေကျန်နေလို့ ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ ကျနော့်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဦးခေါင်းရှိတဲ့အတွက် ထောက်ခံသင့်တဲ့အခါ ထောက်ခံပြီး၊ ကန့်ကွက်သင့်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့အခါ ကန့်ကွက်တာ၊ ဝေဖန်ထောက်ပြတာကိုတော့ ကျနော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းများ ပိတ်ပင်စရာမလိုဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က မူလက အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်ငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အခု ကျနော် ပြန်ဝင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ အဖွဲ့ဝင်ဆိုရင် မိခင်အဖွဲ့ကို လွတ်လပ်စွာ ထောက်ခံနိုင်ပေမဲ့ လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခွင့်မရှိလို့ပါ။ အခု အားလုံးစဉ်းစားကြည့်စေချင်တဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကအငြင်းပွားနေတဲ့ စကားရပ်ကိစ္စကို ကျနော် သဘောပေါက်ပုံတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဥပမာလေး ၂ ခုနဲ့ ပြောပါရစေ။
၁။ “ဟေ့၊ မင်းတို့အဖွဲ့ ဒီအဆောက်အဦထဲမှာနေ၊ အဆောက်အဦကိုလဲ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြ”
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော်တို့အိမ်ကြီးထဲရောက်သွားပါပြီ။ အိမ်ကြီးထဲ နေရာတကျဖြစ်သွားတဲ့နောက် ဟိုဟိုသည်သည် လျှောက်ကြည့်တော့ အနည်းငယ်ရွဲ့နေတဲ့တံခါးလဲတွေ့ပါတယ်၊ ကြမ်းပြင် နိမ့်နေတဲ့နေရာလဲတွေ့ပါတယ်။ ခေါင်မိုးက မိုးယိုတဲ့နေရာလဲတွေ့ပါတယ်၊ ဒိုင်းတွေ မျှားတွေထဲမှာလဲ ညွှတ်နေတဲ့ ဒိုင်းတွေ မျှားတွေတွေ့ပါတယ်။ အောက်မှာလဲ ဆင့်တွေ တန်းတွေထဲမှာ ခြဝင်နေတဲ့ ဆင့်တွေ တန်းတွေလဲ တွေ့ပါတယ်။ ဒါတွေကို အချိန်ယူကြည့်ရင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့လာတာပါ။ ကျနော်တို့က ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာနေခွင့်ရပြီး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လဲ ကတိသစ္စာပြုထားတဲ့အတွက် ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးဟာ ကျနော်တို့တာဝန်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ အိမ်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုမပျက်စေပဲ၊ မကောင်းတဲ့နေရာတွေကို ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့ တဖြည်းဖြည်းခြင်းပြင်ဖို့ တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ တချို့အစိပ်အပိုင်းတွေက ကျနော်တို့လူအားအများကြီးလိုတဲ့အတွက် နိုင်ရာကစပြီးပြင်ရပါမယ်။ တခြားလူတွေ ပါဝင်ကူညီလာအောင် စည်းရုံးပြီး အားကောင်းလာရင် ကျနော်တို့ ခေါင်မိုးတို့ ကြမ်းခင်းတို့လို အရေးအပါဆုံးနေရာတွေကို ပြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလောက်ရေးရင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်” ဆိုတဲ့စကားဟာ ပိုကောင်းအောင် ပြုပြင်နိုင်တယ်၊ မွမ်းမံနိုင်တယ် ဆိုတာ နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၂။ တစ်ဖက်က စစ်တပ်ကလဲပါနေတဲ့အခါ စစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပမာတစ်ခု ပေးပါရစေ၊
“ဟေ့၊ မင်းတို့တပ်ခွဲ ဟောဒီတောင်ကုန်းကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြ” လို့ အထက်က အမိန့်ပေးပါတယ်။
အဲဒီတပ်ခွဲ တောင်ကုန်းမှာ နေရာယူတပ်စွဲလိုက်ပြီး ခေါင်းဆောင်တွေ စခန်းဝန်းကျင် လိုက်ကြည့်ပါတယ်။ မူလကဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ခံတပ်မှာ ချို့ယွင်းချက်တွေတွေ့လာပါတယ်။ တက်လမ်း ဆုတ်လမ်းမကောင်းဘူး၊ ရန်သူခိုပြီးတက်လာနိုင်တဲ့ သစ်ပင်တွေရှိနေတယ်၊ ရှိတဲ့လူအားနဲ့ ဖယ်မထုတ်နိုင်တဲ့ အတော်ကြီးမားတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလဲ တွေ့ရတယ်။ ကတုတ်ကျင်းတွေဟာ တိမ်နေတဲ့အပြင် ကူးလူးသွားလာရေးဟာ အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတွေ မြေပြိုပိတ်ဆို့နေရာတွေ ရှိနေတယ်။ တခြားပြုပြင်စရာတွေလဲ တွေ့လာရတယ်။
တပ်ခွဲမှူးနဲ့ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေက ချက်ခြင်းပြင်နိုင်တာတွေကို စပြင်တယ်၊ စက်ယန္တယားတွေပါမှ ပြင်လို့ရမဲ့နေရာအတွက်ကျရင် အချိန်ယူပြီး စောင့်ရတယ်။ ဒီမှာလဲပဲ “ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်” ဆိုတာမှာ မပြုပြင်ရဘူး၊ မမွမ်းမံရဘူးဆိုတာ အလျဉ်းမပါဘူးဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အခု ကျနော် “လေးစားလိုက်နာပါမည်” ဆိုတာကို ကျနော် ဘယ်လိုသဘောပေါက်သလဲဆိုတာကိုလဲ ဥပမာ ၂ ခုနဲ့ ရှင်းပါ့မယ်။
၁။ “ဟောဒီကျောင်းကိုတက်ချင်ရင် ဟောဒီစည်းကမ်းတွေကို လေးစားလိုက်နာရမယ်”
ဆရာ ဆရာမတွေကို ရိုသေလေးစားရမယ်။
ခွင့်တိုင်ရင် အုပ်ထိန်းသူရဲ့ လက်မှတ်ပါရမယ်။
ကျောင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မြင့်အောင်လုပ်ရမယ်၊ ကျဆင်းစေမဲ့အပြုအမူ မလုပ်ရဘူး။
စာသင်ချိန်မှာ မဆိုင်တဲ့စာ (ဝတ္ထု၊ ဂျာနယ်စသည်) မဖတ်ရဘူး၊ သီချင်းခိုးနားမထောင်ရဘူး၊ ဂိမ်း မဆော့ရဘူး။ အစာမစားရဘူး။
ကျောင်းအပ်ချိန်မှာ မိဖကော သားသမီးကျောင်းသားကပါ ကျောင်းစည်းကမ်းတွေကို လေးစားလိုက်နာပါမည်လို့ ခံဝန်ချက် လက်မှတ်ထိုးရပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ့်သားသမီးတက်စေချင်တဲ့ ကျောင်းကောင်းမှာ တက်ခွင့်ရပါတယ်။ ဒီ ကျောင်းစည်းကမ်းကို မိဖကော ကျောင်းသားပါ ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တာဝန်ယူထားသူတွေက အခြေခံလိုက်နာဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေဖြစ်နေလို့ပါ။
၂။ စောစောကလိုပဲ တစ်ဖက်က စစ်တပ်ပါနေတဲ့အတွက် စစ်နဲ့ယှဉ်တဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးကြည့်ပါရစေ၊
“စစ်တက္ကသိုလ်ကိုတက်ခွင့်ရသူအားလုံး အောက်ပါစည်းကမ်းများကို လေးစားလိုက်နာရမည်” ဆိုပါတော့၊
မနက်တိုင်း တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာစောင့်သိပါမည်ဆိုသော သစ္စာကို ဆိုရမည်၊
သင်ကြားပို့ချချက်များကို အားကြိုးမာန်တက် ဆည်းပူးလေ့လာကြရမည်၊
ခရီးတို ခရီးရှည်ချီတက်ပွဲ၊ ညတိုက်ပွဲ၊ အနီးကပ်တိုက်ပွဲ လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းတွင် ပါဝင်လေ့ကျင့်ရမည်။
မြို့ထဲကို အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့မှတစ်ပါး မထွက်ရ၊
မူးယစ်စေတတ်သော သေရည်သေရက်၊ ဆေးဝါး သုံးဆောင်ခြင်းမပြုရ၊
စစ်တက္ကသိုလ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် မပြုလုပ်ရ။
စသဖြင့် စသဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရသူ ဗိုလ်လောင်းကျောင်းသားတွေ လေးစားလိုက်နာပါမည်ဆိုတဲ့ ခံဝန်ချက်နဲ့ တက်ကြရမယ်လို့ ယုံပါတယ်။ ကျနော်ဟာ စစ်ဖက်ကမဟုတ်တဲ့အတွက် ဥပမာအဖြစ်သာ အချက်အလက်တွေပေးတာပါ၊ အဖွဲ့ချုပ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရ ဦးတင်ဦးတို့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းထိန်တို့ဆိုရင် ပိုသိပါတယ်။ ဒီစည်းကမ်းတွေကို အထက်ကချထားတာပါ။ ပြင်ဆင်ဖို့လိုရင် အထက်အဆင့်ဆင့်က ညှိနှိုင်းတိုင်ပြီးပြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်လောင်းတွေက ပြင်လို့မရပါဘူး။
ဥပမာပေါင်း မြောက်မြားစွာကို မိတ်ဆွေတို့လဲ ခုလောက်ဆို စဉ်းစားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို အဖွဲ့ချုပ်က ပြင်ဆင်ပေးဖို့ ဘာကြောင့်ဒီလောက် ဝိရိယစိုက်နေ ကြောင့်ကြနေရတယ်ဆိုတာ ကျနော်နားလည်လို့မရပါဘူး။ သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာ ဒီစကားတွေရဲ့အဓိပ္ဗါယ်ဟာ ဒီလိုလဲ တွေးနိုင်ပါလားလို့ ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့လူ တကယ်ပဲ တစ်ယောက်မှမရှိဘူးလား။ အတော်အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကြီးက ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ အနီးကပ်တစ်ယောက်ယောက်ကပြောလိုက်ရင် ရှေ့ကဖားက အုံး အင် ဆိုရင် နောက်ကဖားတွေကလဲ ဝိုင်းပြီး အုံး အင် လိုက်ကြတာပဲ တွေ့နေရတော့ အနာဂါတ်ဒီမိုကရေစီရေးဟာ မော်ဖိုကရေစီ(Mobocracy) အုပ်စုကြီးသူကနိုင်ရေးများဖြစ်သွားမလားလို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်ဗျာ။ တချို့ကတော့ ခရစ်တစ်ကယ်လ် သင့်ကိန်း (Critical Thinking ) လို့အသံဖလှယ်ခေါ်ပြီး တချို့ကတော့ ဖောက်ထွက်အတွေးလို့သုံးတယ်ထင်ပါတယ်။ အဲလိုလဲ တွေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ လူများတိုင်း အမှန်သာဖြစ်ကြေးဆိုရင် ဗုဒ္ဓဝါဒပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
ကျနော်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအမြင်ရှိသူတွေ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားမှာလဲ အများအပြားရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် မနေ့ကတင်ပေးခဲ့တဲ့ ၂၀ ရက်နေ့က စတားရဲ့သတင်းထဲက ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသန်းမောင်က “ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်လို့မရဘူး ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လေးစားလိုက်နာဆိုတဲ့ စကားလုံးကမှ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ဆိုတာထက် ပိုပြီးတော့ ပြင်းထန်သလို ရှိနေပါသေးတယ်။” အဲလို သူ့အမြင်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေနေတဲ့အိမ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါတယ်။ ပြင်ဆင်တာ ဆေးသုတ်တာတွေလုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင်မှုလုပ်တဲ့အတွက် ဦးအောင်ဆန်းဦးနဲ့ မောင်နှစ်မခြင်း တရားတဘောင်ဖြစ်ရတဲ့အထိ ရောက်ခဲ့ဖူးတာကို မေ့မထားကြပါနဲ့။
ခုတော့ ကိုယ့်ဥဏှောက်နဲ့ကိုယ် နည်းနည်းမှမစဉ်းစားပဲ ခေါင်းဆောင်ကြီးဘာပြောပြော၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အနီးကပ်က ဘာပြောပြော အုံးအင်နေကြတဲ့လူတွေနဲ့ပဲ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ တင်းကြမ်းဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်တယ်၊ အင်္ဂါဖြစ်တယ်။ ဒီလူတွေက သူတို့စွပ်စွဲချင်သလို ကျနော်တို့တစ်တွေကို စွပ်စွဲအပုတ်ချပြီး၊ ရိုင်းရိုင်းပျပျတွေအပါအဝင် ထင်သလို ဆဲရေးကြတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံလိုက်ရင် ကိစ္စပြတ်ပြီ နိုင်ပြီလို့ထင်နေကြတယ်။ ကိုယ့်အဆင့်ကိုကိုယ် နားမလည်ရှာကြဘူး။ သူတို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ပူပန်မှုရှိတာကို လက်ခံပြီး တခြားသူတွေ သူတို့တိုင်းပြည်အတွက် ပူပန်မှုရှိတာကို သူတို့က လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါ သူတို့ရဲ့မဟာခေါင်းဆောင်ကြီးက လိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲ မသိဘူး။ ဝေဖန်ထောက်ပြသူတွေကို သူ့ထက်ငါ နင့်နင့်သီးသီးဝင်ဆဲနိုင်ရင် နာမည်ရမယ်၊ သူရဲကောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်။
စိတ်မကောင်းပေမဲ့ ပြောလိုက်ပါရစေ၊ ခင်ဗျားတို့တတွေဟာ “လူမိုက်တွေ” ၊ ပါဠိလိုကတော့ “ဗာလနံတွေ”၊ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့”Stupid” တွေပါပဲ။
အားလုံး အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များကို လက်ခံတတ်ကြပါစေ၊
Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...	About nyuntshwe
A Myanmar, Buddhist, pacifist, and pragmatic person who believe that we are what we think. That leads him positive thinking and he sees the worldabeautiful place, but he still likes to keep trying forabetter and more beautiful world.	View all posts by nyuntshwe →	This entry was posted in For-my-Country. Bookmark the permalink.	← ဘယ်ထိအောင်လျှော့မလဲ စိန်စိန်
One Response to “မဲပေးခဲ့သူ တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးကတော့ ဆီလိုအပေါက်ရှာမနေပါနဲ့တဲ့”
wei hein oo says:	April 23, 2012 at 3:59 am	dear writer,, very good write,, we’re agreewith this,, all nld are stupid,, brainless,..
aung san su kyi “” done”” soon,, her brain give dog..
Recent Posts	Global Survey Says We’re Eating Better, But Our Diet Is Still Unsustainable
Recent Comments	nyuntshwe on I’m the True Creator of…None-in-All on I’m the True Creator of…နန်းသူဇာ on ‘အိမ် အပြန်”wei hein oo on “မဲပေးခဲ့သူ တိုင်းရင်းသားတစ်ဦး…wei hein oo on ဘယ်ထိအောင်လျှော့မလဲ စိန်စိန်	Archives	October 2014
WordPress.com	Myanmar My Always	Createafree website or blog at WordPress.com.